केही सरल सुझाव: कसरी जेल वार्निश प्रयोग गर्न
हरेक महिला सधैं सुन्दर रहन tends। खुसीको कुरा, आज विभिन्न उपकरण धेरै छन्। तिनीहरूलाई को - को जेल-कोट। यो के हो, यो कसरी कभर प्रयोग गर्न र के गल्ती बचा गर्नुपर्छ - यो सबै र कुरा गर्न चाहन्छु।
हामी जेल वार्निश को प्रविधि आवेदन बुझ्न अघि, यो के मतलब र के नङ कोट को लाभ बुझ्न छ। त्यसैले, सबै को पहिलो यो जेल वार्निश, को जेल कोटिंग विपरीत, बिल्कुल को नङ हानि छैन भने गर्नुपर्छ, तर तिनीहरूले उत्कृष्ट प्रतिरोध छ। नाम "shellac" अक्सर महिलाहरु को लागि जान्छ भन्ने विचार को लागि रूपमा। सबैभन्दा चिरपरिचित साझा निर्माता - यो जेल पलिश को कि जस्तै Shellac छ, र। कोटिंग प्रक्रिया नङ को तागत लागि जाँदा, त्यसैले यसलाई विशेष गरी उत्कृष्ट प्रतिरोध छ। जेल नेल पलिश तीन महिना दुई हप्ता को एक न्यूनतम रहन्छ, र कोटिंग आफ्नो हात को दैनिक काम तोड्ने छैन, यद्यपि अपेक्षाकृत लामो लागू, तर एकदम सरल। पनि एक प्लस नङ एक पारंपरिक लाह, पातलो र केवल एक वा दुई तहहरू जस्तै तरिकामा ढाकेका छन् भन्ने तथ्यलाई छ। त्यहाँ आवरण तल फाइल वा पीस नङ फाइल र अन्य जटिल उपकरण यसलाई बहाना गर्न आवश्यक छैन।
त्यसैले, नङ जेल कसरी लागू गर्न सोचिरहनुभएको, यो मूल्य पूर्व-नङ तयार गर्नुपर्छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ छ।
जरूरी cuticle र podkozhitsu हटाउन मैनीक्योर, टी के गर्न छ। ई।
यो नङ फाइल प्रयोग आवश्यक आकार नङ दिन आवश्यक छ।
यो नङ प्रक्रिया digidratorom (यो एक सामान्य लुगा धुने प्रयोग गर्न सकिन्छ) degrease निश्चित छ।
यी प्रक्रिया पछि मात्र, तपाईं सीधा जेल वार्निश काम गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले, एक सफलता कसरी सही मैनीक्योर गर्न जेल वार्निश प्रयोग गर्न थियो र एकै समयमा एकदम आँखा को Mistress खुसी पार्न लामो छ?
को नङ को राम्ररी सफाई पछि sinkers एक प्राइमर (को नङ र जेल नेल पलिश को राम्रो आसंजन लागि आवश्यक छ, साथै भविष्यमा detachments को बीमा कम्पनी) लागू गर्न आवश्यक छ।
अब मात्र, तपाईं जेल-कोट लागू गर्न सक्नुहुन्छ। धीरे नङ प्लेट को चौडाई र लम्बाइ मार्फत, पातलो तह यो गरेको छ।
सुकाउने। यो चरणको लागि तपाईं एक यूवी दीपक आवश्यक हुनेछ। यसको अधिग्रहण अघि जेल-कोट सुक्खामा आवश्यक कति समय निर्माता, संग जाँच गर्न आवश्यक छ। महत्त्वपूर्ण समय फरक हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई हुनेछ। तपाईं दीपक मैनीक्योर मा nedosushivat वा नङ ज्यादा सक्दैन काम गर्ने छैनन् (दरार वा bubbled गर्न सक्नुहुन्छ)।
कसरी जेल वार्निश प्रयोग गर्न तल जान्नुहोस्। यो चरण मा यो पूर्ण नङ सुक्खामा आवश्यक छ। तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एक वृक्ष-मुक्त कपडा वा ब्रश।
महत्त्वपूर्ण कोटिंग रंग चमक लागि पटक एक जोडी राख्न राम्रो छ भन्ने तथ्यलाई हुनेछ। प्रत्येक staining पछि सबै दीपक र पट्टियां प्रयोग सुकेको।
एक fixative को आवेदन - अन्तमा अन्तिम चरण आयो। को नङ पनि पातलो, सबै यूवी दीपक फेरि सुकेको द्वारा छोप्नुपर्छ।
सबै त्यहाँ ठूलो मैनीक्योर को एकदम लामो अवधिको लागि हो तयार छ!
नियम भण्डारण वार्निश
रंग निर्माताहरु: यो भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ फरक जेल नेल पलिश विभिन्न विशेषताहरु अनुसार लायक छ। त्यसैले, सस्ता उत्पादन हतार छैन, अक्सर यो सिर्फ नक्कली हुन सक्छ, जो को खरीदार नियमित नङ पालिस प्राप्त हुनेछ कूटवेश अन्तर्गत। र यो जेल वार्निश अक्सर सबै प्रयोग गरिएको छैन, एक लामो समय को लागि पहना छ त, एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण हुनेछ। यसको आफ्नो जीवन विस्तार गर्न, हामी दुई सरल नियमहरू सम्झना गर्नुपर्छ:
कि हावा को जार प्रवेश गर्दैन त ढक्कन, धेरै कस बन्द गर्न निश्चित हुनुहोस्।
को यूवी दीपक नजिकै रंग डिब्बे पकड छैन, यसको रेज साथै, ग्लास मार्फत र वार्निश को धेरै संरचना मा काम गर्दै यसलाई जलाएर।
जेल लाह कसरी प्रयोग गर्ने विश्लेषण, तपाईं inept विजार्ड गरेको साधारण गल्ती जोगिन आवश्यक छ कि सम्झना छ। के nuances को प्रकारको यस्तो?
तिनीहरूले धेरै महत्वपूर्ण र आवश्यक छन् किनभने तपाईं प्रक्रिया को एक बिन्दु सम्झना गर्न सक्दैन।
कोटिंग सबै तहहरू निश्चित thinly लागू गर्नुपर्छ।
विशेष गरी ध्यान दिएर जेल लाह को cuticle क्षेत्र र किनाराको साथ लागू गर्नुपर्छ। यो आवरण चाँडै तोड्न टाढा नङ छाला मा गिर, वा भविष्यमा र मैनीक्योर SPOILED गरिनेछ असम्भव छ। रंग अवशेष को cuticle काम गर्न सुन्तला छडी वा उपकरण हटाउन आवश्यक छ।
तपाईं (- अन्तिम चरण अपवाद) को दीपक मा नङ सुकाएपछि चिपचिपा पत्र हटाउन सक्दैन।
क्लेंसेर भनिने विशेष तरल पदार्थ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ topcoat को आवेदन पछि रहने कि, वा पारंपरिक लुगा धुने प्रयोग त्यसो, तर आवश्यक एसिटोन बिना tackiness को प्रभाव हटाउन।
र जेल-lacquers कसरी प्रयोग गर्ने अन्तिम एकदम महत्त्वपूर्ण सल्लाह: को कवरेज मोजा विस्तार गर्न, तपाईं वार्निश र नङ अन्त लागू गर्न आवश्यक छ।
एउटै, अन्तिम कोटिंग लागू यसलाई पनि सम्पूर्ण नङ मा लागू गरिएको छ र किनाराको मा आवश्यक छ। यो मैनीक्योर मोजा लम्ब्याउनु र रंग धुन गर्न अनुमति छैन।
नङ लागि स्नान
कसरी सिंह आकर्षित गर्न? शरीर संरचना र चरण को विश्लेषण
नीलो beret बारेमा सबै
ग्रन्थि endometrial hyperplasia के हो?
बच्चाहरु 3-5 वर्ष को लागि शिक्षा कार्टून: खुशी साथ व्यापार संयोजन
VAZ-2110: थर्मोस्टेट र thermocouple को प्रतिस्थापन
CTP वर्ग र आफ्नो परिभाषा